‘Ny Hitondra Ny Aterineto Any Ambanivohitro No Faniriako.’ Fanomezam-boninahitra Farany Ho An’I Boukary Konaté Avy Amin’ireo Namany Sy Ny Mpiara-miasa Aminy · Global Voices teny Malagasy
‘Ny Hitondra Ny Aterineto Any Ambanivohitro No Faniriako.’ Fanomezam-boninahitra Farany Ho An'I Boukary Konaté Avy Amin'ireo Namany Sy Ny Mpiara-miasa Aminy
Voadika ny 10 Oktobra 2017 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, English
Maty tamin'ny 17 septambra 2017 tao Bamako i Boukary Konaté , mpisava lalana iray ho an'ny tranokala any ambanivohitr'i Mali taorian'ny aretina nahazo azy tampoka.
I Boukary no mpitari-dalana iray nanao ny aterineto ho demaokratika kokoa tao Mali, tamin'ny alàlan'ny tetikasany maro mba hitondrana ny aterineto ho azon'ny Maliana tsy ankanavaka idirana, na aiza na aiza misy azy ireo na ohatrinona ny fidiram-bolany. Nandray anjara tamin'ny tetikasa marobe izy mba hampiroboroboana ny tenindrazany, Bambara, ary hanatsarana ny fidirana amin'ny aterineto any ambanivohitr'i Mali amin'ny alàlan'ny tetikasany ho an'ny Rising Voices, Ségou Villages Connection .
Na nahazo tsikera hatrany aza ny tambajotra sosialy noho ny tolotra vaovao ratsy isan'andro, toy ny fampielezana vaovao faikany, ny fandrahonana antserasera, ny fanodikodinana ny vaovao, ny fandrebirebena ny fanehoan-kevitry ny vahoaka, ary ny fiankinan-doha amin'ny aterineto dia i Boukary no alakely anivon-tany hay namelombelona ny tambajotra sosialy Afrikana. Tiany ny mizara ny tranonkala tsara indrindra ary tsy namela ny vato misakana goavana hanakana ny làlany izy na hamela azy ho rendrika any amin'ny ambany indrindra izay mampihozongozona tsy mitsahatra ny vondrom-piarahamonina nomerika manerantany. Misaona ny fahaverezan'ity mpikambana iray anisan'ireo ankafiziny ao aminy ity ny vondrom-piarahamonina Global Voices. Indreto ny hafatra sasany avy amin'ireo namany ho fanomezam-boninahitra farany ny fiainana nodiaviny nahafinaritra sy feno ny maha-olombelona tamin'ny fanompoana ny hafa:
Nandao antsika aloha loatra i Boukary Konate, lehilahy iray somary bitika saingy be herimpo. Sarotra ny manazava ho an'ireo izay tsy nahalala azy ny zavatra nentiny ho an'ny vondrom-piarahamoniny, kanefa naneho ny tsara indrindra tamin'ny fiainana kosa izy teto an-tany ary nanana ny fahamendrehana sy ny fahendrena teo anivontsika.
Ny vondrom-piarahamonina GV : Malahelo mafy izahay manambara ny fahafatesan'ny namana sady mpiara-miasa aminay, Boukary Konaté, omaly tao Bamako taorian'ny aretina fohy. Miavaka ny tantarany, araka ny filazany azy teto raha nanomboka teto amin'ny GV izy: https: //fr.globalvoices .org / 2009/09/06/18655 /, ary mahagaga mihitsy aza. Goavana ny asa nataony ho an'ny tanindrazany tao Mali, indrindra fa ny ezaka nataony ho an'ireo tanànakeliny tamin'ny fiarovana ny kolontsainy sy ny fomban-drazany mba hanaparitahana ny aterineto.
Boukary miaraka amin'ireo mpianatra tao Segou tamin'ny alàlan'ny rising voices
Simba Deogratias: Boukary, hahatsiaro anao lalandava izahay ry rahalahy. Enga anie handry am-piadanana ianao.
Claire Ulrich: Namoy ny namantsika Boukary avy ao Bamako isika androany. Aoka izy handry am-piadanana. Ny namany ato amin'ny Global Voices dia namoy namana tsy hisy hahasolo.
Anne Greffe : Mampalahelo. Olona tsara fanahy, ilay hery ao ambadiky ny hetsika miavaka, mpanangana ary malala-tanana. Famoizana goavana ny toy izany.
Suzanne Lehn: Mandry am-piadanana i Boukary. Nandao antsika tamin'ny hirifiry tsy azo nihodivirana izy. Fiaraha-miory amin'ny fianakaviany.
Mina Harker : Ry namako, ho tsaroanay ny fahalalanao, ny fahendrenao, ny fahaizanao. Enga anie handry am-piadanana ianao, ry namako!
Manolotra fiaraha-miory ho an'ny fianakaviany manontolo sy ireo olon-tiany ny Global Voices .